सोलिड ग्रुप निगम, ९ अक्टोबर १९९३ मा युनाइटेड प्याराकेल माइनिङ कम्पनीको रूपमा स्थापना गरिएको थियो र जून १९९७ मा यसको वर्तमान नाम पुन: नामाकरण गरिएको थियो। समूहले माइसोलिड प्रविधि तथा उपकरण निगम मार्फत ब्राण्डको स्वामित्व प्राप्त गर्दछ।
सन् २०१० मा, सोलिड समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका पिता डेभिड लिमको मोबाइल फोन निर्माता कम्पनी थियो जसद्वारा निर्मित फोनलाई "अमोय सोलिड" भनेर चिनिन्थ्यो। उनको बुबाले उनको कान्छो भाइ जेसनलाई कम्पनीका उत्पादनहरू बेच्न सघाएका थिए। डेभिडका अनुसार एमोय सोलिडले फिलिपिन्समा धेरै बिक्री हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले फोनको दोहोरो सिम सुविधालाई ध्यान दिएर ब्राण्डको नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका थिए। अमोय सोलिडलाई माइ | फोन रूपमा पुनर्गठित गरिएको थियो।
सोलिड ग्रूपले जून २५ जून २००७ मा माइफोन ब्राण्डलाई बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको साथ दर्ताका लागि आवेदन दिएको थियो। यस ब्राण्डलाई सर्वप्रथम सेप्टेम्बर २००७ मा सोलिड ग्रूपले बजारमा प्रस्तुत गरेको थियो। माइफोन, दोहोर सक्रिय सिम सुविधा प्रदान गर्ने देशको पहिलो मोबाइल फोन ब्राण्ड बनेको थियो। माईफोन ब्रान्ड सोलिड ग्रूपको प्राथमिक अंश मध्ये एकमा वृद्धि भएको थियो र सन् २०११ सम्ममा उक्त अंश कम्पनीको राजस्वको लगभग आधा प्रतिशत हो। १८ मे २०१६ मा, कम्पनीले यसको आइएसडिबी-टि-सक्षम स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरूको श्रृङ्खलालाई अनावरण गरेको थियो, जसले गर्दा कम्पनी उक्त सुविधा प्रदान गर्ने तेस्रो स्थानीय स्मार्ट उपकरण विक्रेता बनेको थियो। ७ नोभेम्बर २०१६ मा, माइफोन मोबाइल अनुप्रयोग र अङ्कीय सामग्रीमा विस्तार भएको थियो जसले आफुलाई एक बहु माध्यम कम्पनीको रूपमा चित्रण गरेको थियोे।
1. उत्पादन तथा बनावट
कम्पनीले मोबाइल फोनमा पूर्व स्थापित अनुप्रयोगहरू र फिलिपिन्स सफ्टवेयर विकासकर्ताहरूद्वारा निर्माण गरिएका सुविधाहरूलाई समावेश गर्दछ। माइफोन मोबाइल फोन सन् २०११ मा चीनमा निर्माण गरिएको थियो। माइफोन मोबाइल फोनमा पहिले नै स्थापित सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोग क्याथोलिक प्रार्थना अनुप्रयोग हो।
2. बजार साझेदारी
अन्तर्राष्ट्रिय डाटा निगमले गरेको एक अध्ययनमा, सन् २०१४ मा उत्पादनका अनुसार माइफोन फिलिपिन्सको तेस्रो ठूलो मोबाइल फोन ब्राण्ड हो। जुन २०१६ मा, माइफोनले फिलिपिन्सको बजारमा कम्तिमा ५० मोबाइल फोन ब्राण्डहरूको पहिचान गर्दछ। हङकङमा माइफोन पनि वितरित गरिएको थियो।
एप्पल निगमको आइफोनको विरुद्धमा वाणिज्यिक चिन्ह प्रकरण
एप्पल निगमले माईफोनको नाममा सोलिड ग्रुप बिरुद्द मुद्दा दायर गरेको थियो। माइफोन, आईफोन ब्राण्डसँग एकदमै मिल्दोजुल्दो छ" र यसले गर्दा धोका वा भ्रम पैदा हुन सक्ने आइफोनले दावी गरेको थियो। फिलिपिन्स बौद्धिक सम्पत्ती कार्यालयले १९ मे २०१५ मा एप्पल निगमद्वारा दायर गरेको मुद्दालाई खारेज गरेको थियो, जबकि दुवै ब्राण्डको नाम उस्ता उस्तै भएता पनि फोनको शब्दले दुईको बिचमा भ्रम पार्न पर्याप्त आधार नभएको बताइएको थियो।
बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयका निर्देशक नथनेल एरेभालोले एप्पल निगमको यो कदमको आलोचना गरेका थिए।